यो कस्तो सेवा हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ? बोर्ड छ सेवा छैन... — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > यो कस्तो सेवा हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ? बोर्ड छ सेवा छैन…
बेनी। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा पश्चिम क्षेत्रको दरवाङ बजारमा बोर्ड राखिएको छ, तर सुविधा भने शून्य छ । द्वन्द्वकालमा विस्थापित बनेको दरवाङ शाखा पुनःस्थापना गर्नुअघि वाणिज्य बैंकले शाखारहित बैकिङ् सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय ओम पुनलाई आधिकारिक जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, पुनले शाखाको ‘उद्घाटन’ नभएको भन्दै काम नगरेपछि सो क्षेत्रका सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ इकाइका अध्यक्ष मोतीराज उपाध्याय गौतमले शाखारहित बैकिङ सुविधामा धेरै सेवा पाइने भए पनि दरवाङबाट त्यो पाउन नसकेको बताए । उक्त शाखा पुनःस्थापना गर्न दरवाङ क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई निरन्तर माग गर्दै आएका छन् ।
जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको दरवाङका व्यवसायीले शाखा पुनःस्थापनाका लागि वार्षिक आठ करोडदेखि १० करोडसम्म निक्षेप सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । वाणिज्य बैंक म्याग्दी शाखाका प्रबन्धक धुव्रराज पनेरुले आफू आउनु पूर्व नै दरवाङमा पुनलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक २
२०७३ कार्तिक २ गते १७:५१ मा प्रकाशित
टेम्पोवाला बैंकरको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना !
१५०० बाट तल झर्यो नेप्से,बजारमा ९ अंकको गिरावट
तीन संस्थाको १३०%,१००% र ३०% हकप्रद शुक्रबारबाट खुल्यो !